China EXACT HSS Step Drill Bit 12mm x 20mm mpanamboatra sy mpamatsy | Mingtaishun
HSS Dingana Dingana
Ho an'ny fandavahana haingana ny metaly sy plastika. Ho ampiasaina amin'ny fandavahana herinaratra miaraka amina chuck 13mm.
Manome lavaka mazava amin'ny fampiharana mitaky fampitomboana habe kely
Tsy ilaina ny lavaka fanamoriana manitatra ny lavaka efa misy
Mety ho ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny fandavahana herinaratra
Fampahalalana momba ny fampiharana
Ny bitsika fandavahana dingana dia matetika ampiasaina amin'ny fampiharana herinaratra, fantson-drano ary HVAC. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny fandavahana lavaka maro be nefa tsy mila manova habe matetika. Izy ireo dia mifanaraka amin'ny fitaovana mandeha amin'ny tadiny na tsy misy tariby.
Fa maninona ianao no mividy dingana fandavahana?
Dingan-tongotra dia fantsom-pitaovana tokana misy zoro sodina nohamarinina. Manolotra famolavolana tendrony tsy manam-paharoa izay manafoana ny fivezivezena ary mampitombo ny hafainganan'ny fandavahana. Izy ireo dia mifanaraka amin'ny fitaovana elektrika izay mampiditra chuck, ohatra; mpamily boribory tsy misy tariby
Inona avy ireo fitaovana hodinihiny?
Ireo fitaovana mahazatra dia misy:
Ahoana no fomba tsara hitrandrahana dingana?
Ny dingana fandavahana dingana dia fitaovana fanampiny izay tsy voahodino, ny fitsipika miasa dia tsotra dia tsotra ianao afaka mandavaka lavaka habe marobe nefa tsy manova ilay bitika ary mahavita famaranana madio tsara isaky ny mandeha.
Azo ampiasaina amin'ny milina fandavahana tsy mihetsika ve ny dingana fandavahana dingana iray?
Eny, ny dingana fandavahana dia mifanaraka amin'ny fitaovana mandeha amin'ny tanana ary koa ny milina fandavahana.
HSS Dingana Drill Bit
Boroka Bit Type Dingana Drill Bit
Isan'ny dingana 9
Haben'ny loha farafahakeliny 12mm
Haben'ny loha farafaharatsiny 20mm
Teo aloha: Haben'ny metrika Dingana atsofoka amin'ny sodina mahitsy
Manaraka: Spiral Flute Step Drill, 7/8 ary 1-1 / 8
Dingana Drill Bit